cms [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/d/dd38cbefd4fce034bc6c41b5a19c4761.xhtml failed
Content Management System (Systeme de Gestion de Contenu) dia systeme manamora ny fitantanana ny contenu. Zavatra maro no mety ho hita ao anatin’ny contenu iray, ohatra raisintsika lahatsoratra anankiray , misy ny soratra izay votoatin’ilay lahatsoratra, misy ireo rakitra (fichier) samihafa miaraka aminy. Ohatra ireny lahatsoratra hita amin’ny gazety maro ireny.
Ny CMS izany aloha dia hahafahana manamboatra ny contenu, ankoatr’izay anefa dia tokony hanome fomba hitantanana ihany koa ireo sokajin’olona samihafa mampiasa azy, ny fahafahana mitady mora foana ireo karazana contenu, ny fisokajiana, ny fitantanana ny fizotry ny fanaparihahana (workflow), ny faharetany.
Arak’izany dia tokony hisaraka tsara ao anaty CMS ny contenu amin’ny fanehoana azy (presentation).
Ny ankamaroan’ny CMS ankehitriny dia mbola betsaka no tsy mahafeno io fepetra io. (Ohatra : formatage miaraka amin’ilay izy ka raha vao mivadika systeme hafa dia tsy mandeha intsony). Ny fampiasana ny metadata ary ny fampiasana format standard ohatra hoe XML no fomba iray hanatanterahana izany. Mbola olana ihany koa ohatra ny fanomezana sokajy ny contenu iray satria ny ankabeazany dia ilay systeme izany hoe ilay CMS na ilay olona mampiasa no milaza ny sokajy misy ny contenu iray. Ny idealy anefa dia tokony ny metadata ao anaty contenu iray no mamoaka ho azy ny sokajy misy azy.
Ohatra raisina : Raha misy lahatsotra iray ao anaty sokajy UNIX ohatra , raha ovaina fotsiny ny anaran’ilay sokajy dia tsy mitombina intsony ilay izy , ny votoatin’ilay lahatsoratra anefa tsy miova. Dikany izany dia tokony ho ao anatin’ilay contenu no manome fanapahan-kevitra amin’ny sokajy tokony hisy azy.
Ny systeme WinFS hiaraka amin’ny Longhorn no manakaiky indrindra amin’izao an’io CMS idealy io.
Maro dia maro ny karazana CMS, misy hatramin’ny faran’izay tsotra indrindra, ka hatramin’ireo izay tena katraka indrindra. Araka ny ilain’ny tsirairay azy avy no tokony hisafidianana azy.
CMS Open Source php/MySQL : http://www.opensourcecms.com/
Fampitahana CMS : http://www.cmsmatrix.org/
cms.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43